Munaasabada-6aad Xuska Maalinta calanka Qaranka oo siwayn looga xusay Jijiga. - Cakaara News
Jigjiga(CakaaraNews) Isniin Sept 23,2013.Waxaa maanta guud ahaanba dalka itoobiya gaar ahaana DDDI si balaadhan looga xusay maalinta calanka qaranka itoobiya oo ah markii 6aad ee Xuskan qaran ka dhaco dalka. Sidoo kale ka sakow caasimada DDSI waxaa si aad saraysa looga xusay Munaasabada qaran ee maalinta dhamaan gobolada iyo degmooyinka deegaanku ka kooban yahay. Haddaba waxaa munaasabad si heer sare aha loo soo agaasimay ay ka dhacay garoonka wayn ee badhtamaha xarunta deegaanka waxaana ka soo qayb galay munaasabada xuska maalinta calanka dalka masuuliyiinta xukuumada ugu saraysa oo uu ma mid yahay madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar ku xigeenadiisa, golaha wasiirada DDSI saraakiisha ciidamada qaranka, ciidamada qaranka ee ka hawlaga bariga dalka itoobiya saraakiisha ciidamada liyuu booliska, ciidamada ka hortada banana baxyada ee DDSI, Madaxda DFI,Qorayaasha Qaranka,fanaanin,Odoyaal-dhaqameedka,shaqaalaha dawlada, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo kooxaha fanka iyo suugaanka ee DDSI.
Munaasabadan xuska maalinta calanka oo ay halku dhigyo u ahaayeen, Astaanta calankeenu waa xaqiijinta sinaanshaha iyo midnimadeena, inaga oo dhaqan galinaya geediga dib u curashada, biyo-xidhkeenna dib u curashadu waa Aataarta bilicda calankeena, calankeenu waa calaamada la halganka saboolnimada, inaga oo ku han wayn calankeena ayaa ku guulaysanaynaa tir tirida saboolnimada,Calankeenu waa damaanada Sugida Xuuqdeena Qowmiyadeed iyo halku-dhegyo kalaba.
Munaasabadan oo ahayd mid aad u qurux badan ayaa waxaa inta aan khudbada masuuliyinta la galin heese qiiro leh oo ka turjimaya astaanta calanka ku sii mada-daalinayay dadwaynaha kooxaha fanka iyo suugaanka ee Deegaanka.
Dhanka kale waxaa garoonka Hadba raxan raxan ugu gaardinayay cudubyo ka mid ah ciimadada qaranka kuwa liyuu booliska iyo kuwa ka hortaga banaanbaxyada iyagoona Cutub kasta marka uu la siman yahay barta ku beegan Mfadhiga madaxweynaha DDSI salaan Sharaf ka Qadanayay madaxweynaha DDSI oo ay wehelinayeen Madaxda Ciidamadu.
Mayorka Maamulka magaalada Jigjiga Mudane C/risaaq saxane ayaa Ka hor Khudbadii Madaxweynaha DDSi ka soo jeediyay Munaasabada Qaran ee Maalinta Calanka Dalka kalmado ka turjumayay Midhaha laga dhaxlay halgankii qadhaadhaa ee ay EPRDF kaga tuureen Shacabweynaha Reer Itoobiya hagardaamadii Dhergiga kuna xaqiijiyeen Astaanta qaran ee calanka,Sinaanta,saraynta Dastuurka iyo wadanoolaanshaha walaalnimo ee shucuubta iyo Qowmiyadaha.